Friday June 30, 2017 - 11:11:55 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo markale dib uga qarxay degmada Janaale oo katirsan Shabeelaha Hoose.
Sawir Hore degmada Janaale
Wararka ka imaanaya Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in kumanaan katirsan ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo Maleeshiyaadka Dowladda Federaalka ay saaka aroortii hore duullaan ballaaran ku qaadeen magaalada Janaale oo qiyaastii 75 KM dhanka Koonfur galbeed uga beegan magaalada Muqdisho.
Duullaanka ciidamada huwanta ah ku qaadeen Janaale ayaa dhaliyay dagaal culus oo saacado badan qaatay kadib markii ciidamada Xarakada Al Shabaab ay weerar xooggan kala hortageen.
Wariye ku sugan Sh/Hoose ayaa SomaliMeMo khadka Taleefanka ugu sheegay in ciidamada isbaheysatada Cadowga ah si xun looga jebiyay dagaalka islamarkaana laga saaray xaafado ku dhow Koontaroolka magaalada laga galo oo saaka ay qabsadeen.
Ka Hor intii aysan Ciidamada AMISOM magaalada geliyay ayaa madaafiic ku rusheeyeen inta badan xaafadaha degmada Janaale ka koobantahay balse madaafiicdaasi uma suurtagelin in ay kusii nagaadaan magaalada.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in Meydadka ciidamo Yugaandheys ah ay daadsanyihiin gudaha degmada Janaale, Meydadka 5 Askari oo katirsan Ciidamada AMISOM ayaa dadka shacab ah ku arkeen goobihii lagu dagaallamay sidoo kale waxaa jiray Meydad ay ka carareen maleeshiyaadka DF-ka ee duullaanka ku wehliyay ciidamada shisheeye.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in gaari dagaal ciidamada AMISOM looga gubay Koontaroolka degmada Janaale, gaariga lagubay ayaa yaal afaafka hore ee magaalada, khasaara lixaad leh ayaa lasoo sheegayaa in ciidamada shisheeye uu dagaalka kasoo gaaray.
Ciidamada Al Shabaab ayaa gaaf wareegaya magaalada Janaale waxaana muuqata in ciidamada huwanta ah ay ku fashilmeen isku daygoodi ahaa in magaalada ay si buuxda ula wareegaan.